मन्त्री भर्सेस मन्त्रीः लालबाबु पण्डितविरुद्ध रवीन्द्र अधिकारी « GDP Nepal
मन्त्री भर्सेस मन्त्रीः लालबाबु पण्डितविरुद्ध रवीन्द्र अधिकारी
Published On : 17 June, 2018 8:53 am
काठमाडौं । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित गैरआवासीय नेपालीप्रति निकै आक्रामक छन् । ग्रीनकार्ड र पीआरबाहक नेपालीहरुलाई कुनै पनि सुविधा दिननहुने उनको अडानका कारण नेपालका ‘राष्ट्रवादी’माझ उनी लोकप्रिय पनि छन् ।
पण्डितले विगतमा पीआरवाहक कर्मचारीलाई कारवाही सुरु गरेपछि उनको लोकप्रियता बढेको हो । सोही लोकप्रियताको बलमा उनले कांग्रेसका बलिया नेता डा. शेखर कोइरालालाई हराउँदै संसदीय निर्वाचन जितेर फेरि उही मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका छन् ।
तर, केपी ओली सरकारकै अर्का मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन) भने मन्त्री पण्डितसँग पूरै असहमत छन् । हाल अमेरिकामा रहेका मन्त्री अधिकारीले त्यहाँको नेपाली समुदायलाई सम्बोधन गर्दै भने– नेपाली सँधै नेपाली नै हुन्छ, भुतपूर्व वा वर्तमान भन्ने हुँदैन ।
पर्यटनमन्त्री अधिकारी गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अमेरिकाले आयोजना गरेको विज्ञ सम्मेलनको उदघाटनका लागि अमेरिका गएका हुन् ।
“हामी नेपाली जहाँ बसे पनि नेपाली नै हौं, देश बनाउने क्षमता नेपालकोले मात्र पुग्दैन गैरआवासीय नेपालीहरुको सहयोग र सक्रियता पनि चाहिन्छ । अव तपाई यता (विदेश) र उता (नेपाल) बस्ने सवै नेपाली हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने हो,” अधिकारीले भने, “तपाइँहरु सबै धनी र सम्पन्न हुनु भयो भने पनि देश सम्पन्न हुन सकेन भने सुखी र खुसी हुन सक्नुहुन्न । त्यसैले देशलाई समृद्ध बनाउने काममा हामी सबै लाग्नु जरुरी छ ।”
सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले विदेशमा स्थायी रुपमा वस्ने नेपालीलाई भुतपूर्व नेपाली हुन् भन्ने गरेको विषयप्रति अमेरिकाका नेपालीहरुले आक्रोस व्यक्त गर्दै मन्त्री अधिकारीलाई यसबारेमा प्रश्न उठाएका थिए ।
नेपाली जनसम्पर्क समितिका पूर्वसंयोजक विष्णु सुवेदीले वर्तमान सरकारका मन्त्रीले विदेशमा वस्ने नेपालीलाई पूर्व नेपाली भनेकोमा आपत्ति जनाउंदै सरकारको धारणा राख्न भनेका थिए । अन्य सहभागीहरुले पनि यस विषयमा बोल्न मन्त्री अधिकारीलाई आग्रह गरेका थिए ।
अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. अर्जुन कार्कीले पनि आफू अमेरिकाको अस्थायी राजदूत भएको तर, यहाँ बस्ने गैरआवासीय नेपालीहरु स्थायी राजदूत भएको बताए ।
एनआरएनएका अध्यक्ष भवन भट्टले सबै हात एकै साथको भावनाअनुसार बढ्ने बेला भएको बताउँदै यसको सुरुवात सरकारले प्रधानमन्त्रीको राजकीय भ्रमणहरुमा एनआरएनएलाई सहभागी गराएर गरेको हामीले अनुभुति गरेको बताए